Palestina: Mametraka Amin’ny Alalan’ny Sary Ny Andavanandrom-Piainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2014 11:38 GMT
Fantatrao ve nanomboka tamin'ny taona 1967, hazon'oliva 800 000 no nokapaina tao Palestina? Mitovy amin'ny fandravana Central Parks (Ao New York) in-33.
Fantatrao ve fa tsy mahazo rano afa-tsy 70 litatra isan'andro ny Palestiniana iray ao Cisjordania, na dia rano 100 litatra farafahakeliny isan'andro aza no nolazain'ny ONU? Mahazo rano 150 litatra isan'andro ny olom-pirenena Britanika.
Fantatrao ve fa ankoatra ireo mpitsoa-ponenana – manana kara-panondro 5 karazana ny Palestiniana, avy amin'ny governemanta Israeliana ny 4 amin'izany? Rafitra mametra ny toerana azon'ny olona onenana, ny tolo-draharaha azony idirana, ary ny fomba fandraisan'izy ireo anjara amin'ny rafitra politika.
Mifaningotsingotra ny andavan'androm-piainan'ny Palestiniana – sarotra hoan'ny vahiny ny mahatakatra izany. Saingy mandray ny fanamby amin'ny alalan'ny fampielezana ny teny ny Visualizing Palestine (Mampibaribary an'i Palestina), manangana famoronana hita maso mamariparitra ny zavamisy marina momba an'i Palesitina sy Israely. Nitondray ho amin'ny fahazoana loka avy amin'ny mpitsara tamin'ny Fikatrohana Ara-tsosialy tamin'ny fifaninanana Bilaogy Tsara Indrindra nokarakarain'ny Deusche Welle ny asan'izy ireo.
Navadika ho sary manintona, natao ho sary mora takarina amin'ny fampiasana azy amin'ny fanentanana rehetra na amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto ireo tahiry saro-devonina sy mifaningotsingotra. Anisan'ny tanjon'ny tetikasa ny fanamafisana ny hafatr'izy ireo mba hipaka any amin'ireo olona kendrena manokana, ary hampitombo ny fiantraikan'izany vaovao izany. Nadika tamin'ny teny maro ireo sary – izay azo hidirana amin'ny endriny isan-karazany sy ambanin'ny zon'ny mpamorona Creative Commons.
Krizin'ny Mari-Panondroana (Identity Crisis): Rafitra Famantarana Manokana ny Israeliana, Visualizing Palestine & Conor McNall (CC BY-NC-ND)
Fakantsary dimy vaky: Mitombo miaraka amin'ny fijoroan'ny Bil'in, Naji Almir dia sary nampifandraisina tamin'ny lahatsary fanadihadiana mitovy anarana (CC BY-NC-ND)
Nahasarika ny saina ny ekipa hatramin'ny namoahany ny fampahalalam-baovaony voalohany tamin'ny volana Febroary 2012 . Voalaza tamin'ireo lahatsoratra maro iraisampirenena izy ireo, anisan'izany ny Huffington Post, Fast Company, Al-Jazeera amin'ny teny Anglisy, ary ny Open Democracy, ankoatra ny hafa.
Azo fehezina ao anaty dingana 8 ny fizotry ny fahazoana sary farany:
Mijery lalana sy hevi-baovao
Fikarohana: mahazo ireo tahiry madiodio sy mampiditra ireo loharanom-baovao
Tantara: manao izany ho tantara maharesy lahatra
Tsipalotra: mandika izany amin'ny lahatsoratra fohy
Ravaka: mitondra famoronana mba hanehoana izany ho hita maso
Fandinihana ny asa mba hiantohana ny kalitao
Mamoaka ny sangan'asa ao amin'ny aterineto
Fepetra: Manaraka akaiky ny fiantraikany sy ny lazany
Voarakitra tsara ao amin'ny habaka “Visualizing Palestine” ireo loharanom-baovao rehetra – sarotra toherina ny manohitra ny vaovao atolotra rehefa sady lehibe no azo antoka ny loharanom-baovao.
Hazo Oliva 800 000 niongotra, Park Central x 33, Polypod sy Philippe Ghabayen (CC BY-NC-ND)
Mampibaribary an'i Palestina dia tetikasan'ny Visualizing Impact, miasa hamokatra tahiry fitaratarafana sy tahiry fanentanana hoan'ireo mpanentana sy mpikatroka.